Ileta Northern Italy Site Train | Save A Train
Home > Inzọ Njem Italytali > Ileta Northern Italy Site Train
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 11/02/2020)
Italy is one of the most popular countries in Europe to visit because of the variety of ebe n'ime ya ókè-ala-. Northern Italy bụ a Premiya hotspot mgbe ọ na-abịa Italian omenala, na nke ukwuu maka njem na-ahụ ma na-eme. Ma nlele mmanya dị mma na-eri nri na ụwa-klas nri ma ọ bụ ịgagharị oge ochie castles na ụka, mpaghara a na-enye pụrụ iche ahụmahụ na ị ga-n'anya. E nwere ọtụtụ ebe inyocha na Northern Italy, ma ọ bụrụ na i nwere a izu ma ọ bụ abụọ na-eji na Italy, na ị na-aghaghị ịhụ ụfọdụ ebe captivate ị. Ebe a na-a di na nwunye nke aro maka ebe ileta mgbe agaa leta Northern Italy ụgbọ okporo ígwè.
Begin your Touring Northern Italy By Train na Milan
Malite gị nleta Northern Italy na Milan, ejiji isi obodo nke ụwa. The obodo jupụtara pụtara Renaissance ije, ịrịba Cathedrals na ụwa-klas ọrụ nkà. Visitors nwekwara ike ile a ụbọchị njem na Italian ọdọ mmiri na Southern Alps region a fabulous mepere. Milan bụkwa n'ụlọ Milan Central, na a na-ewere ka otu n'ime ihe ndị kasị mma European n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè. Nke a bụ zuru okè n'ebe na-amalite gị njem nke Northern Italy.
La Spezia na Milan Ụgbọ oloko
Parma na Milan Ụgbọ oloko
The ụgbọ okporo ígwè njem site Milan na Venice bụ a abụọ na ọkara awa, with plenty of mma ụgbọ okporo njem nwere ike na-enwe mmasị n'ebe gị ajụjụ window. Site oge ị na-ahapụ ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Venice, i nwere ike enwetaghị a hụperetụ nke oké Grand Canal, ebe ọ bụla ụdị watercraft nwere ike hụrụ ụgbọ site. Venice mee nke 118 isuo jikọọ site àkwà mmiri na iche iche site ọwa mmiri. Nke a dị ebube obodo bụ ma ama maka na ya mara mma, ije, artworks na cobblestone n'okporo ámá. Ebiet nwere ike ọ gaghị enyere ma na-ada na ịhụnanya na nke a enchanted region. Ileta Northern Italy ụgbọ okporo ígwè bụghị ezu na-enweghị a nleta Venice.
Florence, ama Renaissance obodo, na-emi odude dị nnọọ awa atọ site okporo ígwè site Venice. Ozugbo ị na-eru nke a na-aga, fọrọ nke nta ọ bụla isi na saịtị ahụ bụ n'ime na-eje ije anya si n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè. Dị ka isi obodo nke Tuscany region, Florence obụrede mbụre ịtụnanya nri na mmanya, yana ụwa-klas ngosi ihe mgbe ochie. Gaa na iconic nlegharị anya, gụnyere ukwu Ponte Vecchio makwaara dị ka 'Old Bridge', na towering Florence Duomo na Michelangelo si ọkpụkpụ nke David.
Cinque Na – Ileta Northern Italy Site Train
Mee Cinque Na ikpeazụ unu stop – a pụtara region bụ naanị awa ole na ole ụgbọ okporo ígwè si Florence. Cinque Na enweghị ngosi ihe mgbe ochie ma ọ bụ ịrịba ama akụkọ ihe mere eme saịtị ma ọ bụ a pụtara ìhè na ngalaba nke Italian Riviera na e ekpe akpatụbeghị. Mgbe ụbọchị nke agaa leta Northern Italy ụgbọ okporo ígwè, nke a bụ nke zuru okè n'ebe enwe Italy si eke odida obodo. Ugwu ugwu coastline bụ ngwakọta nke oké nkume ọnụ ọnụ ugwu na mara mma ubi vaịn ise mara mma ma n'ime ime obodo azu obodo nta.
Reggio Emilia na Levanto Ụgbọ oloko
Genoa ka Levanto Ụgbọ oloko
Sestri Levante ka Levanto Ụgbọ oloko
Parma ka Levanto Ụgbọ oloko
The obodo na-ejikọrọ na site ugbo, hiking ụzọ na N'ezie ụgbọ okporo ígwè e. Inyocha ọnụ ọnụ ugwu na osimiri na gbanye mmanu na otu n'ime ọmarịcha cafes n'elu ugwu nkume mkputamkpu na-anọ ọdụ ụgbọ mmiri. Nke a idyllic region bụ n'ezie ume-inweta – zuru okè n'ebe re-nwee ume. Si ebe a ị pụrụ a ụgbọ okporo azụ Milan ebe i nwere ike na-amalite njem gị home.
Ndi na ị ịgagharị Northern Italy ụgbọ okporo ígwè? Let us know the favorite places that you have visited by tweeting us at @SaveATrain! anyị bụkwa ifịk ifịk ke niile na-elekọta mmadụ na ọwa, lelee Saveatrain
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, mgbe pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftouring-northern-italy-by-train%2F – (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#cinqueterra italia milan northitaly njegharị travelitaly njem